မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး တောထဲတွင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး တောထဲတွင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား မန္တလေး ဇွန်လ ၂ ရွှေမောင်မောင်(မိတ္တီလာ) မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိတ္တီလာမြို့နယ် သရက်ပင်ကျေးရွာ အနီး မိတ္တီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်း ကားလမ်း အရှေ့ဘက် တပ်မြေအတွင်း တောထဲတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ဇွန်(၂)ရက် နံက်(၉)နာရီခန့် Continuous reading
စာသင်ကျောင်းမှာ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အမေရိကန်က ဆရာမလေး မိသားစု
စာသင်ကျောင်းမှာ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အမေရိကန်က ဆရာမလေး မိသားစု ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊သနပ်ပင်မြို့ အ.ထ.ကကျောင်းဝင်းအတွင်းအမေရိကန်ဆရာမလေးAbby Hester ရဲ့အဖွားနဲ့မိသားစုလှူဒါန်းတဲ့၃၀ပေ×၉၀ပေ၂ထပ်ကျောင်းဆောင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ….. ကျောင်းဆောင်သစ်မှာလျှပ်စစ်မီးမပါလို့ ၂၇ကြိမ်မြောက်အာစရိယပူဇော်ပွဲမှလျှပ်စစ်မီးအတွက်ကောက်ခံထားတဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့အလှူငွေရယ်မြို့မိမြို့ဖများထံမှအလှူငွေ၎သိန်းရယ်မီတာ၁လုံးအသစ်လျှောက်ထားတာရပြီဖြစ်လို့ကိုဘိုဘိုထွန်းအဖွဲ့နဲ့မနက်ဖြန်ကစပြီးလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမှာဖြစ်ပါတယ်….. သ နပ် ပင် အ .ထ .က ကျောင်း သူ ဟောင်း တစ် ဦး ဖြစ် တဲ့ Continuous reading
02/06/2019 Yan Naing 0
တစ်နေ့ ထိုင်ထ အခါ (၂၀) လုပ်ရုံနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် ကောင်းကျိုးတွေ.. ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာလှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်ချင်တယ်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ နေ့စဉ်ထိုင်ထလုပ်ပေးတာပါပဲ။ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းက အရမ်းရိုးရှင်းလွန်းပေမယ့် ရလာမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက အံ့မခန်းမို့ အထင်သေးလို့တော့ မရဘူးနော် ….. ။ Continuous reading
ပင်လယ်ပြင်က မုန်တိုင်းထဲမှာ ဘဘအောင်မင်းခေါင် ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ကပ္ပတိန်ကြည်ရှိန် *ကျွန်တော့်အမည်က ဦးကြည်ရှိန်ပါ။နိုင်ငံခြားသင်္ဘောမှာ ကပ္ပတိန်ရာထူးအထိ ထမ်းဆောင်ဖူးတာကြောင့် ကပ္ပတိန်ကြည်ရှိန်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။Omic Myanmar အုပ်စုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ပါတယ်။မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးပါ။ *ကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့သင်္ဘောဟာ ပနားမားနိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စိဖိတ် သမုဒ္ဓရာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို အသွားမှာ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။သမုဒ္ဒရာထဲ ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ Continuous reading
ကလေးမြန်မြန်အိပ်အောင် ဘီယာတိုက်တဲ့ ကလေးထိန်း (ရုပ်သံ) လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးငယ်လေးကို နို့တိုက်ရမယ့်အစား ကလေးမြန်မြန်အိပ်အောင် သောက်လက်စ ဘီယာကိုတိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ရုပ်သံ အွန်လိုင်းပေါ် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ဆူညံသွားခဲ့ပါတယ် ….. ။ ရုပ်သံမှာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ကလေးထိန်းတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးက ကလေးကို Continuous reading
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း တခုတွင် ကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရဟုဆိုကာ အမှုဖွင့်
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း တခုတွင် ကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရဟုဆိုကာ အမှုဖွင့် နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိ မြို့နယ်ရှိ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတခုတွင် အသက် ၃ နှစ် မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုကာ မိဘများက ရဲစခန်းတွင်း အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ Continuous reading
အမျိုးသမီးတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ပုရိသအမျိုးအစား (၅)မျိုး အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်၊ ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ လက်တလော မျက်မြင်တစ်ခုတည်းကို အခြေခံရွေးချယ်တာထက်စာရင် အားသာချက် အားနာချက်တွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အချိန်ပေးပြီး လေ့လာသင့်တာ အမှန်ပဲ …. ။ တကယ်လို့ သင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အမျိုးသားတွေထဲမှာ အောက်ပါအရည်အချင်းတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ အမျိုးသားမျိုး Continuous reading
သိန်းတစ်သာင်းခွဲထီပေါက်ပေမယ့် ကွမ်းယာဆက်ရောင်းမယ့် ဇနီးမောင်နှံ
သိန်းတစ်သာင်းခွဲထီပေါက်ပေမယ့် ကွမ်းယာဆက်ရောင်းမယ့် ဇနီးမောင်နှံ ၄ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီးကို မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ ထဲက ပွင့်သစ် ကွမ်းယာဆိုင် ပိုင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံက ဆွတ်ခူး သွားပါတယ် …. ။မန္တလေးမြို့ မြရည် နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ Continuous reading
တရက်တော့ မနက် ထည့်ပေး လိုက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ညနေ ကျောင်းဆင်းလို့ ထမင်းဗူးဆေးချိန် အရမ်းနံနေတာ မသင်္ကာလို့ ရေနွေးပူနဲ့ ပြုတ်လိုက်သောအခါ
တရက်တော့ မနက် ထည့်ပေး လိုက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ညနေ ကျောင်းဆင်းလို့ ထမင်းဗူးဆေးချိန် အရမ်းနံနေတာ မသင်္ကာလို့ ရေနွေးပူနဲ့ ပြုတ်လိုက်သောအခါ အတွေ့အကြုံလေးမျှဝေပါရစေရှင့် မေမေတို့ရေ … ကျောင်းဖွင့်ခါနီးပြီ ဆိုတော့ သားငယ်သမီးငယ် တို့ ကျောင်းတက်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်စု နေကြပြီပေါ့နှော်… ကလေးထမင်းဗူးဝယ်ရင် ပုံထဲက Continuous reading